QUORN အသားအစားထိုး - ငါသူတို့ကိုငါကြိုးစားခဲ့ဒါကြောင့်သင်မလိုအပ်ပါ - သတင်း
Quorn အသားအစားထိုး - ငါသူတို့ကိုသင်ကြိုးစားရန်မလိုပါဒါကြောင့်ငါကြိုးစားခဲ့သည်
လူတိုင်းကတက္ကသိုလ်မှာဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေသွားကြပုံရတယ်။ ၎င်းသည်သင်၏ဂန္ထဝင်သက်သတ်လွတ်ဝါဒ၊ pescatarianism သို့မဟုတ်သက်သတ်လွတ်ဝါဒပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တိရိစ္ဆာန်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဒonနိကဗေဒကိုအမှန်တကယ်ဟောပြောတဲ့သူအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည်။ ပြောင်းလဲသွားတယ် သူတို့ကို။ အမဲသားစားခြင်းအတွက်ကိုယ်ကျင့်တရားမျှတမှုကိုအလွန်အမင်းဝေဖန်သောစာစီစာကုံးတစ်ခုရေးပြီးနောက်တွင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကျည်ဆန်ကိုကိုက်ခြင်း၊ အရေခြုံသူဖြစ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးကျွန်ုပ်၏စစ်မှန်တဲ့အချစ်၊
ငါ ၀ န်ခံရတော့မယ်၊ ငါးကိုစားနေတုန်းပဲ (ငါပီဇာမှာမန္နမုန့်အော်တာကိုအော်တဲ့အခါသက်သတ်လွတ်စားသူလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုခေါ်သလဲဆိုတာထပ်ပြောပါ။ ) ဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ရံဒိန်ခဲဘာဂါကိုတွန်းလှန်ဖို့တကယ့်ကိုခက်ခဲနိုင်ပါတယ် အခြားလူတိုင်းတ ဦး တည်းလာတဲ့အခါဘေကွန်နှင့်အတူ။
ငါအသားလွတ်တယ် ဒီတော့ အများကြီး။ ငါရယ်စရာကပျော့ပျောင်းသောစားချင်သောသူ၏စားပါနဲ့ကျွန်မငရုတ်ကောင်း, မှိုနှင့် aubergines မကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်သက်သတ်လွတ်ရွေးချယ်စရာမှကြွလာသောအခါငါတော်တော်လေးလွဲချော်သွားတာပေါ့။ ဒါကြောင့်ငါ Quorn ထုတ်လုပ်သောကွဲပြားခြားနားသောအသားအစားထိုးထုတ်ကုန်များကိုစမ်းသပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်တုပရန်ကြိုးစားနေသည့်အသားနှင့်သူတို့၏အသွင်အပြင်၊ အရသာနှင့်တူညီမှုကိုအဆင့်သတ်မှတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Mo ဖာရာအတွက်လုံလောက်လျှင်၎င်းသည်ငါ့အတွက်လုံလောက်သည်။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီကိုအမှတ် ၂၀ ဖြင့်အမှတ်အသားပြုရန်ငါးမှတ်၊ အရသာအတွက် ၁၀ ခုနှင့်တူညီမှုအတွက် ၅ ခုပါလိမ့်မည်။ စကားမစပ်ငါသက်သတ်လွတ် Quorn options များအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှောင့်အယှက်မသွားဘူး, ဖွင့်သူတို့အားလုံးသုညရယူဆကြကုန်အံ့။
ဤကြက်သားအခဲများသည်ငါအမြဲတမ်းစားဖူးသမျှသောအကောင်းဆုံးကြက်သား nuggets များဖြစ်သည်။ ထိုကြက်သားအရသာနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမငြိမ်မသက်မှုများအားလုံးသည်။ သူတို့မှာအရသာရှိတဲ့ငရုတ်သီးမှုန့်တွေရှိတယ်။ သူတို့ကိုယ်ထဲကတကယ့်ကိုကြက်သားလိုအရသာရှိတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့၊ ငါအသားမစားသောခြောက်လသည်ကျွန်ုပ်၏အရသာကိုခံစားခဲ့ရပြီးကြက်သားကိုအလွန်တောင့်တသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့အနေဖြင့်အမှန်တကယ်အရသာရှိကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်၏အိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်အရသာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည် ဒါကြောင့် Quorn ခဲ့ကြောင်းပြောပြနိုင်ဘူး။ ဒါဟာငါ့ထံမှကြီးမားသောဟုတ်ကဲ့။
တူညီမှု - ၅
သက်သတ်လွတ်အစားအစာများသည်အကောင့်များအရဆိုးဝါးလှသည်။ အဆိုပါ Quorn ဗားရှင်းမျှခြွင်းချက်မဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျ Sainsbury ရဲ့အတွက် 20p များအတွက်မဝယ်နိုင်သူတွေကိုစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောဝက်အူချောင်းမှထပ်တူထပ်မျှ Mushy နှင့် doughy ။ သို့သော်၎င်းကိုစဉ်းစားရန်လာသော်လည်းသူတို့တွင်မည်သည့်အစစ်အမှန်အသားများပါဝင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသေချာပါ။ မယုံနိုင်လောက်အောင်ငန်သောငန်သောကြောင့်သင်သည် WHP တွင်ရူဗာရူံးထက်ဤအစားအစာများကိုစားပြီးနောက်ရေပိုကျသည်။ အားလုံးအကြံပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ သင်သည်သင်၏ Bangers နှင့် mash အစားထိုးချင်လျှင်ငါအစစ်အမှန်အရာကြိုးစားပြီးပုံတူပွားပါဘူးသောအမှတ်တံဆိပ်များထဲမှကြိုးစားလိမ့်မယ်။
- elliot (@langho) ဒီဇင်ဘာလ 24, 2016
အရသာ - ၂
ငါသက်သတ်လွတ်ဖြစ်လာမတိုင်မီငါ Quorn ရဲ့အေးခဲကြက်သားအပိုင်းပိုင်းအစာစားခြင်းစတင်ခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကသူတို့ဟာဆော့စ်နဲ့အရသာအားလုံးကိုစုပ်ယူပြီးသင်ချက်ပြုတ်နေတဲ့အရသာကိုပဲယူသွားတာပါ၊ ဒါပေမယ့်ကောင်းမွန်တဲ့ texture နဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ကျောင်းသားများအတွက်အမှန်တကယ်စျေးပေါတဲ့အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကြက်သားကြော်။ အဆိုပါ texture, ကြက် nuggets မတူဘဲအဓိကအားဖြင့်သင်တို့ကိုတစ် ဦး ငံပြာရည်၌ရှိပါကကြောင့်ကြက်သားဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားသောအစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူသောကြောင့်, ကြက်သားနှင့်ဆင်တူသည်မဟုတ်။ အသား - အခမဲ့ - တနင်္လာနေ့ကိုကြိုးစားလိုသူများသို့မဟုတ်ငွေနည်းနည်းမျှသာစုဆောင်းလိုသူများအတွက်ဤအချက်များကိုကျွန်ုပ်သေချာပေါက်အကြံပြုပါသည်။
သက်သတ်လွတ်ကြော်ကြော် # day1 #vegetariandietplan #vegetariandiet #quornchickenpieces #vegetarianmealshare
၂၀၁၆ အောက်တိုဘာ ၇ ရက်နံနက် ၁၀း၁၉ နာရီတွင် Hazeee (@its_hazee) မှတင်ပြသောဓာတ်ပုံတစ်ပုံ
တူညီမှု - ၃
လက်တွေ့အားဖြင့်၊ လူအများစုတို့သည်အိမ်တွင်ဘာဂါများစားကြသည့်တစ်ခုတည်းသောအချိန်သူတို့သည်အရက်မူးနေပြီးစိတ်နေစိတ်ထားရှိသည့်အခါဘာဘီကျူးတစ်ခုတွင်ဖြစ်သည်။ ဒါကချက်ချင်းစံချိန်စံညွှန်းများအစုလိုက်အပြုံလိုက်လျှော့ချဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်, ထို့ကြောင့်ငါအထူးသဖြင့်ကြမ်းတမ်းဖြစ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ငါဟာလူကြိုက်များတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဂျာနယ်လစ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟာဒီအရသာစမ်းသပ်မှုမတိုင်ခင်စပျစ်ရည်ပုလင်းတစ်ခွက်ကိုသောက်ခဲ့တယ်။
ဤဘာဂါများသည်အခြားအရောင်များနှင့်ဆင်တူသော်လည်းအရသာရှိသောအရသာနှင့်အရသာရှိသော်လည်းတစ်ချိန်ကချုံဖုတ်ထဲ၌တွန်းကန်ခြင်းခံရသည်၊ ရိုးသားရန်အတွက်ဒိန်ခဲအချပ်တစ်ခုနှင့်အတူ ketchup (သို့မဟုတ် mayo - ငါမစီရင်မိ) ကထိပ်သို့ရောက်ရန် t ဘယ်သူကတကယ်ဂရုစိုက်တာလဲ ဘာဂါများ၏အရသာနှင့်တူညီမှုကိုဆန့်ကျင်။ ၎င်းတို့သည်သက်သတ်လွတ်စားသူများအားတူညီသောအတွေ့အကြုံကိုခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်အသားကင်သည့်အစားအစာနှင့်ပတ်သက်လျှင်အရေးကြီးသည်။ ဝက်အူချောင်းများမီးရှို့ခံရမည်၊ ကြက်သားလျော့သွားမည်၊ ဆမ်သည်ပေါ့ပါး။ သူ၏ဘုရင်ပုစွန်ထည်ကိုအော့အန်သွားသောကြောင့်ဆမ်သည်မည်သို့ပင်ငါတို့စားစရာကိုချန်ထားလိမ့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်မည်သည့်အရာကမျှကြီးကျယ်ခမ်းနားသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒီဘာဂါတွေကကောင်းပါတယ်
ယနေ့ညညစာအတွက်စူပါ yummy Quorn ဘာဂါလုပ်သည်! #vegetarian #veggie #quorn #quornburger #healthyliving
Devon Louise (@ devonlouise96 @) မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်၊
Bolognese, သိုးထိန်းရဲ့ပိုင်, lasagne - ငါအပေါ်ကိုသွားလိုအပ်ပါတယ်? Mince သည်ဆောင်းတွင်း၏အေးမြမှုကိုသင်အမှန်တကယ်မျှော်လင့်စေသောအစားအစာများကိုချက်ပြုတ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်သည်ခရစ္စမတ်အားလပ်ရက်များ၌အိမ်၌နေစဉ်အတွင်းသင့်မိခင်ကပြုလုပ်သောပူပြင်းသည့်ဟင်းလျာများကိုသင်စားနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏မိခင်ကချက်ပြုတ်ထားသော Quorn ထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။
ဒီစမ်းသပ်မှုအတွက်ငါ lasagne လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ သတောပဲ။ ကောင်းတယ် ကြက်သားအပိုင်းအစများနှင့်ဆင်တူသည်၊ ၎င်းကိုသင်ဆော့စ်ထဲထည့်လိုက်ခြင်းက၎င်းသည်စုပ်ယူလိုက်သောအစိုဓာတ်ကြောင့်မူရင်းထုတ်ကုန်နှင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်ဟုဆိုသည်။ သင်သည်အကောင်းဆုံးသောရလဒ်များအတွက် ၀ မ်းဗိုက်ရောဂါအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်မ ၀ င်ခင် ၁၀ မိနစ်အကြာမည်သည့်ငံပြာရည်ကိုမဆိုထည့်ပေါင်းနိုင်သည်။ သို့သော် lasagne သည်မီးဖိုထဲသို့ ၄၅ မိနစ်ခန့်ဝင်သောအခါ၎င်းသည်အတော်အတန်မြန်သောပေါက်ကွဲမှုဖြစ်သည့်အခါနှင့်မတူပါ။ ။
ဒါက lasagne ကြည်လင်ပြတ်သားစွာကြည့် ... ဒါကငါ့သမီး #quorn #vegetarian #food
ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်၊ နံနက် ၉း၁၀ နာရီ PST တွင် Anna (@anna_michaux) မှတင်ပြသောဓာတ်ပုံ
တူညီမှု - ၄
ကြည့်ရသည်မှာဘေကွန်သည်သင့်အားကင်ဆာဖြစ်စေသည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်ကို BLT ကိုမပျော်နိုင်ဟူသောအချက်ကိုစဉ်းစားမိတိုင်းစိတ်ပျက်လက်ပျက်တွင်းထဲသို့မကျခြင်းမှကယ်တင်သောတစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်။ ငါ Quorn ဗားရှင်းထံမှအနည်းငယ်သာမျှော်လင့်ထား။ ငါအေးခဲအောင်ဝယ်ခဲ့ပေမယ့်မင်းကိုမိုက်ကရိုဝေ့ဖ်မှာရေခဲအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်၊ ဒါကိုအေးအောင်ဝယ်ဖို့အကြံပေးလိမ့်မယ်။ ဒီဟာက spam တွေရဲ့အရောင်ပဲဖြစ်တယ်။ ဒီ့နောက်မှာဘေကွန်ရဲ့သဘာဝြဖစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒီအမေရိကန် streaky bacon BS ရဲ့ပုံသဏ္makeာန်ကိုဘယ်လိုပုံဖော်ရမယ်ဆိုတာကချစ်စရာကောင်းတယ်။
မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်တွင်ရေခဲတောက်နေစဉ်မီးခိုးငွေ့အနံ့အရသာရှိသောအနံ့အရသာသည်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်သော်လည်းအနည်းငယ်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ဖြစ်သော်လည်းငါထွန်။ ၎င်းကိုအခွင့်အရေးပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ချက်ပြုတ်ရေးညွှန်ကြားချက်များကသင်မီးဖိုဖုတ်ရမည်၊ သို့မဟုတ်မုန့်ဖုတ်ရမည်ဟုဆိုလိုသော်လည်း၊ ၎င်းသည်မှားသောအကြံဖြစ်သည်။ အတုချက်ချင်းမည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါ (လိပ်စာအပိုင်း, bap, bun စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်။ မှတ်ချက်အပိုင်းအတွက် cue အငြင်းအခုံ) အချို့သောထောပတ်သီးတက်ခုတ်, ထိပ်ပေါ်မှာဘေကွန်ကျဆင်းသွားခြင်းနှင့် ketchup ထည့်သွင်းငါလိပ်။ ဒီပေါင်းစပ်မှု, ငါယုံကြည်ပါတယ်, သွားကြဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါနဖူးမှာရှိတဲ့ဝက်သားနဲ့ကွဲပြားနေတုန်းနူးညံ့တဲ့ထောပတ်သီးနဲ့ပေါင်မုန့်တို့နဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။ သို့သော်ဤဘေကွန်အတုသည်အရသာနှင့်အထူးသဖြင့်အရောင်မှူလာသောအခါအစစ်အမှန်နှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိသည်။
အရသာ - ၄
ဒါကြီးပဲ။ ကင်ညစာအစားထိုး။ ငါဒီတစ်နှစ်၏အရေးအကြီးဆုံးကင်ညစာဖြစ်သောခရစ္စမတ်နေ့လည်စာမှာကြိုးစားခဲ့သည်။ ဒါဟာသင်တစ်နာရီအောက်မှာများအတွက်မီးဖိုသို့ pop နှင့် yeah ကအနည်းငယ်ဝက်အူချောင်းပုံအထုပ်ထဲမှာလာ yeah, ဒါကြောင့်ကြက်သားကဲ့သို့ကောင်းသောမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်ဟေ့, သူကပြောတယ်ကောင်းစွာကြိုးစားပါတယ်။
ငါဓာတ်ပုံရိုက်ရန်သတိရမတိုင်မီငါဤအစာစားခြင်းမှတဆင့်တစ်ဝက်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုငါ့စိတ်ထဲအတွက်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာငါနှင့်ငါ့မိသားစုရဲ့ခရစ်စမတ်မုန့်ညက်ငါ့နှင့်အတူယူဆောင်ခဲ့သောကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အတူကောင်းတဲ့ကြီးကလိုက်တယ်ပုံသဏ္wasာန်နေစဉ်, ငါဖြစ်ကောင်းအသားခဲ့ကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆိနိုင် (သော်လည်းဘယ်လိုအမျိုးအစားမသေချာဘူး) ။ ၎င်းသည်စိုထိုင်းသောကြောင့်ကြက်သားပုံသဏ္closeာန်နှင့်အတော်လေးနီးစပ်ပြီးအခြားသူသေကောင်များ၏အသားပေါ်တွင်အခြားသူများကစားနေသည့်အချိန်၌သက်သတ်လွတ်စားသူများကကြိုက်နှစ်သက်သည့်မြူးမြူးမြူးမြူးနေခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျန်မိသားစုများကဲ့သို့အစားအစာများကိုစားနိုင်သကဲ့သို့ခံစားစေခဲ့သည်။ Sorted ။